रोशीमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु – Radio Roshi
रोशीमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु
in रोशी खबर / समाचार / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	April 11, 2021
यश कुमार परियार–चैत्र २९,
काभ्रे जिल्लको रोशी गाउँपालिकामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको छ । आईतबार पुर्व सांसद एवं संविधान सभा सदस्य तिर्थ लामाको प्रमुख आतिथ्यता साथै रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डि.बि. लामाको सभाध्यक्षतामा कटुञ्जे स्थित रोशी माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा प्रतियोगिता शुभारम्भ गरिएको हो ।
कोरोना भाईरसका कारण अघिल्लो वर्ष स्थगित प्रतियोगिता यस वर्ष संचालन गरिएको शुभकामना मन्तव्य राख्दै रोशी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विन्दु प्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य तिर्थ लामाले प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडिहरुलाई शुभकामना दिँदै खेलकुद जिवनको महत्वपुर्ण अभ्यास रहेको बताए । विद्यार्थी जिवनमा शिक्षा सँगै खेलकुदको धेरै महत्व रहेको बताउँदै लामाले– ‘मानिसको सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको ईमान्दारीता हो, त्यसैले जुन सुकै क्षेत्रमा ईमान्दार भएर लाग्नुहोस्’ भने । आफु रोशीकै नागरिक भएको हुँदा हर क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग रहिरहने उनको भनाई थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा सभाध्यक्ष रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डि.बि. लामाले खेल सुखद र सौहार्दपुर्ण रुममा संचालन भएको बताए । खेलमा हार र जित मात्रै ठुलो कुरा नभई यसले दिने ज्ञानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष लामाले अगाडि भने– ‘जस्ले जिते पनि रोशीले नै जित्ने हो, ढुक्क भएर खेल्नुहोस्’ भने ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौला, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहाल, प्रवक्ता पदम बहादुर लामा, शिक्षा तथा खेलकुद शाखा राम बहादुर लामाले मन्तव्य राखेका थिए भने बिभिन्न वडाका अध्यक्षहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु, पत्रकार लगायत विध्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको उपस्थिति थियो ।
आज (आईतबार) बाट सुरु भएको प्रतियोगिता ३ दिन सम्म चल्ने छ । खेलमा रोशी गाउँपालिका भरी रहेका १६ वटा माध्यमिक विद्यालय मध्ये रोशी १४ वटा सहभागि छन् । प्रतियोगितामा भलिबल, कबड्डी, १ सय, २ सय ३ सय मिटर दौड, हाई जम्प, लङ जम्प, शट पुट लगायतका खेल समावेश गरिएको छ ।